Arsenal Oo Lumisay Fursad Ay Hoggaanka Kula Wareegi Lahayd
HomeWararka MaantaArsenal Oo Lumisay Fursad Ay Hoggaanka Kula Wareegi Lahayd
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iska khasaarisay fursad ay kula wareegi lahayd hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, kaddib ciyaar khasaare ka soo gaadhay oo ay ku booqatay Everton magaalada Liverpool.
Arsenal oo guuleysatay saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ayaa la hor martay gool laad xor ah oo uu shabaqa dhex dhigay Alexis Sanchez qaybta hore, ka hor intii aanu Seamus Coleman barbarraynin.
Everton ayaa ku naaloonaysay garoonkeeda oo ay taageereyaasheedu buuxaan inay ku soo bandhigtay ciyaar wanaagsa, waxaanay isku dayday inay samayso fursado badan, si ay isaga ilaaliso guul-darradii toddobaadkii hore ay kala kulantay Manchester United oo kale.
Ciyaarta ayaa inteeda badan ahayd 1-1, laakiin daqiiqaddii 85aad ayuu difaacyahanka Ashley Williams dhaliyey goolka guushu ku raacday Everton, markaas oo taageerreyaasha garoonka fadhiyey ay farxad, sawaxan iyo sacab wadata isla oogsadeen.
Everton oo lagu naanayso Tottees ayaa daqiiqaddii u dambaysay kaadhkii labaad ee digniin ah wax aka qaatay difaacyahanka laf-dhabarta u ah ee Phil Jagielka, laakiin wakhtiga oo ku yaraa darteed ayey Arsenal uga faa’iidaysan kari wayday ninkaas booskiisu bannaanaaday.
Guul-darradan ayaa Arsenal u noqonaysa tii labaad ee horyaalka Premier League ay kala kulanto tan iyo markii uu bilaabmay, iyadoo ciyaartii furitaanka horyaalka ay Liverpool ku dhirbaaxday 3-4, markaas wixii ka dambeeyeyna guul-darro may arag, balse barbar dhac badan ayey gashay. Waxay guul-darradani keentay in ay saddex dhibcood ka hooseeyaan Chelsea oo kulankeeda toddobaadka la ciyaaraysa Sunderland.
Everton ayaa iyaduna kor ugu ruqaansatay kaalinta toddobaad, waxaanay 4 dhibcood ka hoosaysaa Tottenham.